Sezvakafanotaurwa, 2013 Holiday Sales Yakaenda Nhare | Martech Zone
China, December 5, 2013 China, December 5, 2013 Douglas Karr
Izvo zvaive zvisiri zvekushamisika, zvakapihwa kugamuchirwa kwe smartphone, kuti nhare yaizove nemhedzisiro huru pakutengesa kwezororo kwegore rino. Zvemagariro midhiya zvine zvakawanda zvekukanganisa, asi zviripo pakuenzanisa neyakaitika nhare. Pakati pekutengesa kwakaitika, 38% ye traffic yepamhepo yakabva kune mafoni uye mapiritsi zvinoenderana neBM Digital. 21% yekutengesa kwese pamhepo kwakagadzirwa kubva kune iwo nhare mbozha. Iko kuwedzera kwe5.5% kupfuura 2012!
Pakazara, mazuva mana ekutenga kwevhiki akapfuurira kuratidza online uye nhare kukura nevatengi vachisarudzira kusefa mahwendefa uye mafoni - showrooming, webrooming uye kusvetuka pane nhare dzakapihwa madhiri. Via Genesys
Yakanga isiri ese makuru nhau gore rino, zvakadaro. Sekureva kweNRF, kutanga kwekutengesa kwanga kuri pasi gore rino uye avhareji yekutengera ngoro yaive pasi pe4%.
Tags: 2013Chishanu nhema 20132013 yekutengesa zororomusi wezuvagenesyszororomobile kutengesakuriranhamba